Ny fampiharana tsara indrindra amin'ny taona 2016 | Vaovao IPhone
Ny fampiharana tsara indrindra amin'ny taona 2016
Manohy ny fanangonana Krismasy izahay. Amin'ity tranga ity, mijery jery todika isika hijery izay navelan'ny iOS App Store ho antsika, hahafantatra tsara kokoa izay heverintsika ho fampiharana tamin'ny taona. Tsy voatery hampiditra fampiharana izay natomboka tamin'ity taona ity isika, fa ny fampiharana izay nahomby tamin'ny taona 2016, na inona na inona antony. Mazava ho azy, misokatra amin'ny fanovana izahay, koa midira, Jereo hoe inona ny fampiharana tsara indrindra tamin'ny taona ho anay, manomeza anjara ho anao ary mankafy ny atiny tsara indrindra ao amin'ny iOS App Store.
Mandrosoa, entinay anao ny fanangonana izay tsy mety tsy hita ao amin'ny iOS Springboard anao, na ho an'ny iPad na iPhone, ireo dia ireo fampiharana natolotry ny ekipa Actualidad iPhone ho manan-danja indrindra amin'ny taona 2016. Tiako hamafisina fa tsy hisy ny toerany, ny lisitra fotsiny dia ho ireo fampiharana tsara indrindra ao amin'ny ny filaharan'ny safidinao, noho izany, hampiditra fampiharana ny tsiro rehetra sy ho an'ny mpampiasa rehetra izahay.
1 Votoatin'ny multimedia: Ampidiro
2 Fialamboly: Pokémon Go
3 Saripika sy horonan-tsary: ​​Prisma
4 Tambajotra sosialy: Instagram
5 Vola: Imaginbank
6 Hafatra eo noho eo: WhatsApp
7 Personalization: Gboard
8 Fahasalamana: Hetsika (teratany iOS)
9 Ny fampiharana ratsy indrindra amin'ny taona: PlayStation + PlayStation Messenger
Votoatin'ny multimedia: Ampidiro
Inona no atao hoe Infuse? Eny, fomba hafa sy manintona hamoahana ny atiny multimedia rehetra io. Misaotra an'i Infuse isika dia afaka mahita ny karazana format rehetra eto amin'ny iOS sy tvOS. Ary koa, tsy mila manova na inona na inona mihitsy isika ary hanararaotra ny asan'ny mpizara azy. Na dia marina aza fa tsy maimaim-poana amin'ny ankapobeny ilay rindranasa, dia handany $ 12 eo ho eo ianao, na izany aza, rindrambaiko tena ilaina izany raha manana Apple TV taranaka fahefatra ao an-trano ianao. Izy io koa dia manana fifanarahana amin'ny Google Cast, ny "AirPlay" an'i Google.
Hotazominao foana ny andian-tsarinao sy ny sarimihetsikao noho ny fampidirana azy ao TRAKT.TV ary ny dikanteny tsara indrindra misaotra an'i OPENSUBTITLES. Raha tia sinema sy andian-tantara ianao dia andao hatrehana izany, tsy azonao hadinoina ireo fahafaha-manao entin'i Infuse amin'ny atiny multimedia, miaraka amina endrika multiplatform.
Fialamboly: Pokémon Go
Manampy ahy ny miresaka aminao momba ny Pokémon Go indray. Marina fa ny lazan'ny fampiharana dia nilatsaka be tato ho ato. Na izany aza, ny fahatezerana naterany hatramin'ny nanombohany ary hatramin'ny vao tsy ela akory izay, nahatonga azy io ho iray amin'ireo fampiharana mahomby indrindra teo amin'ny tantara, dia tsy azon'ny olona rehetra esorina. Satria, tsy nanan-tsafidy afa-tsy ny manome satroboninahitra azy ho fampiharana fialamboly tsara indrindra amin'ny taona izahay, na dia tian'ny hafa aza fifandonana Royale Manohy mijanona tsy mihetsika izy ireo, miharihary fa ny trangan-javatra Pokémon Go dia nahavita nanintona na dia ireo toa ahy izay tsy tia milalao amin'ny seho finday aza.
Tsy maintsy lasa mpanazatra Pokémon ianao, manangona azy rehetra ary misambotra gym eny an-dàlana. Ny fomba izay Pokémon Go dia nanova ny zava-misy nitombo mbola tsy nanana ary tsy hanana aloha
Saripika sy horonan-tsary: ​​Prisma
Tsy dia mora loatra ny namorona atiny kanto tamin'ny sary tsotra, amin'ny tranga maro dia sary misy kalitao mampiahiahy mihitsy aza izy ireo. Na izany aza, ny saika tsy manam-petra azo atao Prisma dia nanao azy ho fampiharana fanovana sary malaza indrindra tamin'ny 2016. Saika tsy nisy ny mpamaky anay no nandany ny taona raha tsy nampakatra sary namboarina niaraka tamin'i Prisma tao amin'ny tambajotran-tseraseran'izy ireo.
Prisma manova ny sarinao ho lasa zavakanto mampiasa ny fomban'ny mpanakanto malaza: Munch, Picasso… ary koa firavaka sy firavaka malaza eran-tany. Ny fitambarana tambajotran-tsivana tsy manam-paharoa sy ny faharanitan-tsaina artifisialy dia hanampy anao hamadika fotoana tsy hay hadinoina ho zavakanto tsy manam-potoana.
Tambajotra sosialy: Instagram
Ny tambajotra sosialy sary an'i Facebook dia nahavita dingana mahaliana sy mahay mandanjalanja. Raha efa fisehoan-javatra io, ny fampidirana ny tantara miaraka amin'i Boomerang dia nanimba ny taham-data amin'ny mpampiasa rehetra, ary io Instagram io no tambajotra sosialy amin'izao fotoana izao. Noho ny fahatongavan'ireo horonantsary mivantana dia afaka nahafantatra ireo lafiny amin'ny fiainana andavanandron'ny olo-malaza tsy mbola nisy toy izany izahay teo aloha.
Ho an'ity sy ny maro hafa, Instagram dia tsy isalasalana fa lasa tambajotra sosialin'ny taona. Tsy mandainga ny angon-drakitra, izy io dia tambajotra sosialy amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo mpampiasa mitombo indrindra sy isan'andro, noho izany, amin'ny hitsiny dia tsy maintsy nampidirinay ny Instagram tao anatin'ity fampiharana ambony tamin'ny taona 2016 ity. Izy io dia tambajotra sosialy tonga lafatra hampielezana ny tranga "posture".
Nanaitra anay indray i La Caixa. Izy io dia iray amin'ireo banky manana firoboroboana ara-teknolojia indrindra eo amin'ny sehatry ny firenena, ary misy serivisy bebe kokoa misy, na izany aza, izy io koa dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny resaka kaomisiona. Voavaha daholo ny zava-drehetra, tonga i Imaginbank, ny banky finday, ara-bakiteny. Ary izany ve Imaginbank no bankinao amin'ny fitaovan'ny iOS anao, tsy ho afaka hamoaka azy io ianao, ara-bakiteny.
Izay rehetra azonao atao ao amin'ny sampana dia miharo amin'ny fampiharana Imaginbank, etsy ankilany, ny rafitra serivisy ho an'ny mpanjifa dia miasa amin'ny alàlan'ny WhatsApp, mba hahafahanao manontany kely kokoa ny banky maoderina indrindra amin'izao fotoana izao. Ny katalaogin'ny fahafaha-manao betsaka izay omen'ny fampiharana azy, manao azy ho fampiharana fitantanana ara-bola feno indrindra ao amin'ny iOS App Store, ary afaka manangona vola amin'ny ATM aza izahay noho ny fangatahana.
Hafatra eo noho eo: WhatsApp
Tsy noeritreretiko mihitsy ny hitenenako an'io, fa ny WhatsApp kosa dia niditra voalohany tamin'ny lohateny faran'izay avo lenta tao amin'ny Actualidad iPhone. Marina fa mbola taona vitsivitsy monja amin'ny fampiharana toa ny Telegram, na izany aza, ny fampidirana GIF, antso an-tsary ary ireo fiasa sisa azonao azonao tao anatin'ny herintaona monja dia mendrika ny hatoky tena. Na izany aza, betsaka ny asa miandry ho an'ity fampiharana ity (fananana faharoa an'ny Facebook eo an-tampony). Miankina bebe kokoa amin'ity fampiharana fandefasana hafatra eo noho eo ity izahay.
Kitendry Google? Izay mila ho hitantsika amin'ny iOS. Ary be dia be, na eo aza ny fanomezako azy fotoana maro ary farany niverina tamin'ny iOS tany am-boalohany aho, tsy fahazarana, tsy maintsy milaza ny marina isika ary milaza fa Gboard no lavitra indrindra amin'ny klavin'ny antoko fahatelo misy amin'ny iOSAzonao atao ny manao saika ny zava-drehetra, ny fikarohana ao amin'ny Google, miaraka amin'ny motera fikarohana GIF tafiditra, mizara fifandraisana ary mampiasa fiteny maro amin'ny fitendry iray aza. Raha mbola tsy nanandrana ny Gboard ianao dia mety ho tonga ny fotoana nanomezanao fanandramana an-tsokosoko ity.
Fahasalamana: Hetsika (teratany iOS)
Na dia toa tsy toa izany aza dia tsy afaka nahita fampiharana feno sy mahomby kokoa ao amin'ny iOS App Store aho fa tsy ny Action, iray amin'ireo rindranasa tena ilaina ao amin'ny iOS, indrindra raha manana singa toa ny Apple Watch ianao. Miaraka amin'ny famantaranandro, ny fampiharana dia lasa fampiharana isan'andro isan'andro, izay hahafahanao mitazona fifehezana isan'andro ny fahombiazanao sy ny toetry ny fahasalamanao. Ka noho izany, ary tsy misy ohatra alohako dia hampiditra fampiharana iOS zanatany amin'ity fampiharana fanao isan-taona ity aho, indrindra satria izy ireo izao dia "azo esorina" ary maro no efa nahavita izany.
Ny fampiharana ratsy indrindra amin'ny taona: PlayStation + PlayStation Messenger
Fampiharana vitsy no tsy voatsabo tsara toa ny tontolon'ny fampiharana PlayStation ho an'ny iOS. Mampalahelo fa izy io dia rindranasa iray izay tsy maintsy atrehan'ny mpankafy PlayStation 4 isan'andro, satria noho io dia mividy lalao nomerika isika ary mifandray amin'ireo namantsika. Na izany aza, lesoka tsy tapaka sy tapaka, olana goavana amin'ny PlayStation Store sy ny fampiharana fandefasan-kafatra fanampiny saika tsy misy ilana azy, no antony nahatonga anay nisafidy ny tontolon'ny PlayStation ho fampiharana ratsy indrindra tamin'ny taona 2016 ho an'ny iOS.
Raha manana fampiharana izay heverinao fa tsy hita avy eto ambony ianao, dia anao ny boaty hevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny fampiharana tsara indrindra amin'ny taona 2016
Nofehezin'ny Twitter izany tamin'ny alàlan'ny fanolorana fahadisoana fanovana izay mamafa ny @ mpampiasa amin'ny valiny
Nintendo dia nanangana ny hype ho an'ny Super Mario Run miaraka amin'ity fanambarana vaovao ity